I-India ingathutha ihlukanise iBitcoin njengesigaba sempahla - iCazoo
Ikhaya » Ikhaya » I-India ingahambisa ukuhlukanisa iBitcoin njengesigaba sempahla
Tag: Isigaba sefa le-Bitcoin, Isigaba sefa le-Bitcoin, Ama-cryptocurrensets e-El Salvador, Ama-cryptocurrensets e-India
I-India, eqale yakhombisa ubutha obuningi maqondana ne-cryptocurrensets, manje seyithumele ikomidi okulindeleke ukuthi lithumele isiphakamiso sokuphakanyiswa kwikhabhinethi kungekudala.
Ngemuva kwesinyathelo esingumlando se-El Salvador sokuthola i-Bitcoin njengemali ye-fiat (iyenza imali egcwele - isibonelo esididayo!), Ngisho naseNdiya abathandi be-cryptocurrency bangaphefumula.
Imithombo ebalulekile elandelayo yomkhakha ikhulume nomshicileli I-Indian Express ukuthi uhulumeni usukile esimweni sakhe sangaphambili sobutha maqondana nezimali ezibonakalayo kanye nokunye okuningi kungenzeka ihlukanise iBitcoin njengesigaba sempahla kungekudala e-India.
Umlawuli wemakethe Ezokuphepha kanye neBhodi Yokushintshana yaseNdiya (SEBI) izokwengamela imithethonqubo yomkhakha we-cryptocurrency ngemuva kokuthi iBitcoin ibekwe njengesigaba sefa. Imboni ye-cryptocurrency yaseNdiya nayo isezingxoxweni noMnyango Wezezimali maqondana nokwakhiwa kwesethi entsha yemithethonqubo, futhi imithombo yezimboni iveza ukuthi iqembu lochwepheshe bezinkonzo bayalufunda lolu daba. Umthethonqubo osalungiswa we-cryptocurrency kungenzeka wethulwe ePhalamende.
Lokhu kuthuthuka kuza ngemuva kwezinsuku ezimbalwa iReserve Bank of India (RBI), isekhula liqondise amabhange ku yeka ukugwema ukuthengiselana okubandakanya amathokheni we-virtual icaphuna isiyingi sayo sangaphambilini esivela ku-2018, njengoba sasichithwe yiNkantolo Ephakeme. UMbusi we-RBI uShakthikanta Das, nokho, waphindaphinda ukungabaza kwakhe.
"Singasho nakanjani ukuthi ikomidi elisha elisebenza ngama-cryptocurrensets linethemba elikhulu mayelana nokulawulwa kanye nomthetho wama-cryptocurrensets… Isiphakamiso esisha sokusalungiswa maduze sizoba sekhabhinethi, esizohlola isimo jikelele sithathe igxathu elihamba phambili. Siyaqiniseka kakhulu ukuthi uhulumeni uzokwamukela ubuchwepheshe be-cryptocurrensets kanye ne-blockchain technology". Amagama avela kuKetan Surana, isikhulu sezezimali nomqondisi, uCoinsbit, nelungu, i-Intanethi ne-Mobile Association of India.
Iphepha elimhlophe nge I-Indiatech kusikisela ukuthi ukwamukelwa kwe-Bitcoin kwe-India njengenye indlela yefa kuyikusasa elingokoqobo ngokweqile. Ngenxa ye- imvelo eguquguqukayo zezimali zedijithali (amanani entengo ehla enyuka kakhulu nsuku zonke) - lo mbhalo uyabhala - kunzima ukuwasebenzisa njengethuluzi lokukhokha. Lo mbhalo ubuye wancoma ukukhokhisa intela utshalomali lwe-cryptocurrency, okwenza ukuthi lube ngaphansi kwentela yokuthola imali ngaphansi koMthetho Wentela Yemali Engenayo.
Hitesh Malviya, uchwepheshe ku- blockchain kanye nokutshalwa kwemali kwe-crypto, wathi: "Ngokubona kwami, uhulumeni waseNdiya uzohlola indlela yokwenza iBitcoin ejwayelekile. Angicabangi ukuthi i-India izobheka ukwamukela i-Bitcoin njengemali ye-fiat kungekudala, ngoba izothinta kakhulu isikhundla semali yaseNdiya. Ukwamukela i-Bitcoin njengemali eboshiwe kungumbono omuhle kulezo zizwe ezingenayo imali yazo noma ezincike kudola laseMelika ”.
IBinance eNdiya: Uhulumeni waseNdiya uzobe ecubungula umthethonqubo we-cryptocurrency esikhundleni sokuvinjelwa
I-Binance e-Afrika: Kuqoshwe ukwanda kwenani labasebenzisi abasha base-Afrika
U-Elon Musk eSNL ukhuluma ngeDogecoin, futhi i-doge collapses (ngoMeyi 8, 2021)